Vakinankaratra Tovovavy iray saika namidy70 tapitrisa Ariary
Olona efatra malaza amin’ny fivarotana sy fanondranana olona no saron’ny zandary avy ao amin’ny GAPJ Vakinankaratra ny talata lasa teo.
Avy tamina olona tsara sitrapo no nahazoana ny loharanom-baovao raha efa andro maromaro kosa no nametrahan’ireo mpitandro ny filaminana ny vela-pandrika. Sarona ny 01 desambra 2019 tamin'ny 11 ora alina ny iray, raha ny maraina kosa no tratra ireo telolahy namany. Niaiky ny helony tamin’izany i Jonah, Jean Charles ary Damily samy avy any Morafeno Anjoma/Ramartine, raha avy any Mandoto kosa ny iray. Fantatra tamin'ny alalan'ny findain'izy ireo fa 70 tapitrisa Ar no hivarotany ny olona iray. Avotra soa aman-tsara tamin’izany Rtoakely Hanitra, izay sakaizan'i Jonah ilay mpivarotra olona ihany. Mbola karohina kosa ny atidoha nikotrika ity raharaha fivarotan’olona ity. Miantso ny rehetra mba hiantso ny laharana maitso 119 hatrany ny zandary, raha vantany vao mahita tranga hafahafa fa hotazonin’izy ireo ny tsiambaratelo.